Career - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
လူကြီးမင်းဆိုင်ခွဲများတွင် ခန့်ထားရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအလိုရှိပါသည်။
အမှတ်စဉ် အားလုံးအတွက် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ၊လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသော လူငယ်များ ပညာအရည်အချင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိလည်း အမြန်ဆုံး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအလိုက် သင့်လျော်သော Training များနှင့် သင်ကြားပေးအပ်ပါမည်။ နယ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှင် နေစရာအဆောင် စီစဉ်ပေးပါမည်။
အမှတ် ၆၅/ခ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းစျေးအနီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
Ph: 05 458181881,09 453344800 (ရုံးချိန်အတွင်းသာ)
နီးစပ်ရာ လူကြီးမင်း ဖုန်းဆိုင်ခွဲများနှင့် Mr.Fone ဆိုင်ခွဲများတွင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Thursday, 06 October 2016 17:27
Sale Persons Male/Female (70) Post
- ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်၍ အသက် ၁၈/၂၅ နှစ်ကြား ဖြစ်ရမည်။- ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။- အရောင်းပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - ပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။
Stock Controllers Female (20) Post
- LCCI Level 1+2 အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။- လိုအပ်ပါက Cashier ကို ကူညီပေးနိုင်ရမည်။- ဆယ်တန်းအောင်(သို့) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူ ဖြစ်ရမည်။
Cashiers Female (10) Post
- ကွန်ပျူတာအခြေခံ နှင့် Excel အထူးကျွမ်းကျင်ရမည်။- ဆယ်တန်းအောင်(သို့) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူ ဖြစ်ရမည်။- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ တစ်နှစ် ရှိရမည်။- လိုအပ်ပါက Stock Controller ကို ကူညီပေးနိုင်ရမည်။
Thursday, 06 October 2016 17:26
Technicians Male/Female (20) Post
- Software Technician နှင့်Hardware Technician - Phone နှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်ရှိရမည်။- ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားရှိရမည်။- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်နှစ် ရှိရမည်။- ဆယ်တန်းအောင်(သို့)အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူ ဖြစ်ရမည်။
Market Researchers Male(10) Post
- ဈေးကွက်ကိုလေ့လာရန် တက်ကြွစူးစမ်းတတ်သည့် ယောကျၤားလေးလူငယ်များ အလိုရှိပါသည်။ - Computer အခြေခံ သုံးစွဲတတ်ရပါမည်။- ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်၍ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ကောင်းရပါမည်။- ပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။
Thursday, 06 October 2016 15:03
Assistant Supervisors Female/Male (10) Post
- သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အုပ်ချုပ်မှု အပိုင်းတွင်အနည်းဆုံး (၂)နှစ် ရှိရမည်။- Customer Service ကိုသာ အဓိက အထူးဂရုစိုက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။- Computer Excel, Word ကျွမ်းကျင်ရပါမည်။- ဘွဲ့ရ(သို့)အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူ ဖြစ်ရမည်။
© 2019 Lu Gyi Min - Cell Phone Villa. All right reserved. Developed by: OrientWebs!